Runako Midziyo Inoshandiswa Fekitori | China Runako Midziyo Inoshandiswa Vagadziri nevatengesi
Hydrafacial solution serum yekurapa hydrate kurapwa
Chenesa exfoliants, yakapfava uye isingatsamwise, yakapfava exfoliation, isina kuwedzerwa, inokonzeresa kuteurwa kwemakeratinocyte, hunyoro husingaperi
Inonyorova uye inosimbisa ganda, inovandudza hutachiona hweganda, inhibits melanin, vhitamini C zvinovaka muviri kuganda, inodzorera
masero akakuvara, anobatsira kuvandudzwa.
Exfoliating acne, Nyoro uye isingatsamwise, simba rekuchenesa,
hunyoro hunyoro, hunobvisa acne, mapundu uye mamwe matambudziko, zvinobudirira kunyorova uye kudzikamisa ganda
Korea Aquafacial solution serum yekutengesa
ichangoburwa mune skincare tekinoroji. Hydradermabrasion inoshandisa masimba ekurapa echisikigo emvura neoksijeni kushambadza ganda pasina kushandisa makristasi akaomarara kana emawadhi akaomeswa, achigadzira yakadzika yakanyoroveswa uye ine ganda rinotaridzika riine hutano.
Antifreeze pads membrane yeCryolipolysis mafuta kutonhora kurapwa
1.Kutonhodza chimiro cryolipolysis antifreeze membran
2.Cryotherapy antifreeze inodzivirira ganda
3.Unique nzira yekubvisa antifreeze
4.Beauty SPA / SALONI / CLINIC / CENTRE / AESTHETIC shandisa
Coolplas Antifreeze gelpads membrane yeCryolipolysis mafuta kutonhora kurapwa
3 saizi yeiyo inotonhorera gelpad: 25 * 40cm 25 * 50cm 25 * 60cm
Iyo yekudzivirira gel pad ishizha rakatetepa rekotoni rakanyoroveswa mumushonga wemvura uye rinoshandiswa sechinhu chinopisa chakabatana kuchengetedza nzvimbo yakatarwa panguva yekurapwa.
Yakakosha inotonhorera gelpad yakagadzirirwa madhaidhi anotonhorera, anoshanda kune akasiyana kurapwa maoko.
Yakasarudzika anti--freeze membrane ye COOLPLAS Cryolipolysis muchina kubva kuSincoheren. Zvakare yakakodzera kune ese cryoliplysis muchina.
3 saizi inokodzera nzvimbo dzakasiyana dzekurapa.
Carbon Gel yeNd yag laser kabhoni peeling hollywood peel kurapwa
(1) Carbon powder seyakajairika pigment ine simba rakasimba rekushambadzira, inogona kutora tsvina yakadzika mu pore uye zvakare ine inhibition antiphlogistic maitiro kune acne ganda acne bacillus
(2) Carbon poda pane laser ine yakanakisa adsorption zvivakwa
(3) Kukuvara kwemaseru kwaive kwakavharirwa kune kabhoni poda padhuze nepadhuze padhuze, uye inenge isisina chekuita kune zvisiri-zvinongedzo zvinyama
(4) Isa nano kabhoni poda kumeso, rega ipinde mukati poresi, laser iriputse kuita zvidimbu. kupwanya ivhu uye epidermis cutin: yakaburitsa simba rakawanda kutapurirana kune dermis, inonyatso kukurudzira ganda maseru ekuvandudza uye simba, ichikurudzira collagen fiber uye yakagadziriswa fiber kugadzirisa, ichishandisa ganda rechisikigo kugadzirisa basa, kuvhura collagen nyowani kurongeka uye kurongeka, nekudaro ziva kubvisa makwinya, shrink pore, ganda rakatsetseka, ita kuti ganda ridzorere kusimba kwekutanga.
BB GLOW Serum yeMicroneedle peni kushandiswa
1, Inogona kuiswa yakananga pasina kushandisa Dr. Pen (microneedling meso derma pen). Iko kusanganiswa kwenheyo yemvura uye kukosha kuri nani.
2, Iyo Dr. Pen (microneedling meso derma peni) mashandiro uye maitiro ekushandisa
(1): kuchenesa: kuchenesa kumeso kumeso kuti uwane yakachena uye nyowani mamiriro
(2): inopisa compress: inopisa compress kwemaminitsi mashanu kusvika ku10, chinangwa ndechekuvhura ganda nemabvudzi follicles
(3): Disinfection: Disinfect kumeso nedoro kana iodophor, nzvenga maziso, uye wopukuta kumeso neyakajairwa munyu
(4): Donhedza hwaro hwaro hwaro pachiganda, zvinoenderana nemamiriro eganda remutengi, iyo nano-microneedles yemagetsi yakagadziridzwa kuita 0.5-1.0 yekushanda, uye yakagadziriswa zvinoenderana nekunyaradza kwemuenzi. 30-50 maminitsi
(5): Mushure mekuvhiya, kumeso kunogona kuoneka kwakatsvukuruka, izvo zvinosiyana pamunhu nemunhu. Icho chinhu chinowanzoitika mushure memakemikari. Iwe unogona kushandisa iyo yekugadzirisa inodzikamisa gel kuisa kumeso kwese kana iyo isina kuchena yekugadzirisa mask kune inotonhora compress.
(6): Usabata mvura mukati memaawa matanhatu kusvika masere mushure mekupedzisa hwaro hwekugadzira. Kwemazuva matatu ekutanga, usabata zvinonhuwira uye zvegungwa. Edza kusaisa zvinorema makeup kwemazuva matatu ekutanga.
(7): Iyo nguva pakati pekushanda ingangoita mazuva gumi. Nguva yekuchengetedza inosiyana pamunhu nemunhu. Kazhinji, inochengetwa kwemazuva angangoita masere kusvika gumi nemashanu. Nguva imwe neimwe iyo ganda rinovhenekerwa uye nekuchena, iyo yakawanda nguva yazvinoitwa, inowedzera nguva yekuchengetedza.